Ihe Ize Ndụ abụghị Ntị, Ọ bụ Okwu | Martech Zone
Anyị nwere mkparịta ụka mara mma Mark Schaefer na pọdkastị anyị banyere ọkwa ya, Kedu otu physics nke mgbasa ozi mgbasa ozi na-egbu usoro ịzụ ahịa gị. Mark na-enye ihe akaebe na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-arụ ọrụ na ịnye ọdịnaya dị egwu, nnukwu ọdịnaya nke ọdịnaya bara uru ma na-ebute ọdịnaya ahụ ebe ndị na-ege ntị nọ.
Gee ntị na Ajụjụ ọnụ nke Mark Schaefer
Fọdụ ndị folks na-akpọ nke a nri ọdịnaya na ụfọdụ nuggets. Enwere mgbawa nke ọdịnaya a maka ndị na-ahụ ihe ngosi dị ka Pinterest, Instagram na Vine. N'iburu uto nke ọdịnaya a na-apụghị ịkọwapụta ngwa ngwa, akụkọ ifo nke a na-agbasa n'ahịa niile na ịntanetị bụ nke ahụ 'uche nke ndị na-azụ ahịa na-adị mkpumkpu. Multi-tasking, ndọpụ uche, email, ekwentị, ngwa ọdịnala… ya niile ga-ewere anyị lekwasịrị anya nke ihe aga-eme n'aka.
Ana m akpọ BS.
Ọ bụghị BS na ndụmọdụ Mark, nke m kwenyere na ntụpọ. Ana m akpọ BS na oge nlebara anya nke azụmaahịa ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa na-adịwanye obere. Ekwenyere m na ilebara anya na ilekwasị anya dị ukwuu karịa ka ọ dịbu. Ekwenyere m na ndị na-azụ ahịa na-etinye ihe ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta na ngwaọrụ iji rụọ ọrụ nke ọma na iwesa ozi karịa ka anyị na-ebi kemgbe ụwa. Afọ iri abụọ gara aga, anyị enweghị ohere ịchọta ma nyochachaa ihe anyị zụtara site n'ọbụ aka anyị. Anyị aghaghị ịdabere na ndị ọkachamara na-ere ahịa na ihe ahịa naanị. A zụrụ na mkpebi n'ime ntụkwasị obi nke okwukwe aka na mgbe ụfọdụ obere ihe ọzọ.
N’oge ol n’oge ịntanetị, a na-akpọ ya onye ozi superhighway. Ihe kpatara ya di nfe… ihe omuma di otutu n’ime milliseconds. Maka ndị ahịa, nke a abaala oke uru. N'izu gara aga a, m ga - achọta usoro nchịkwa mgbasa ozi ọhụụ maka blọọgụ m mgbe njedebe ikpeazụ kwụsịrị ụfọdụ atụmatụ ndị isi. Mgbe nkeji ole na ole, enwere m ndepụta zuru ezu nke nyiwe. Mgbe awa ole na ole gasịrị, enwere m ike nyocha nke ndị nwere atụmatụ m chọrọ. N'ime ụbọchị ole na ole, anwalere m nke ọ bụla. Ihe si na ya pụta bụ na achọtara m ikpo okwu na atụmatụ niile m chọrọ n’agwaghị onye ọ bụla okwu ma ọ bụ bịanye aka na nkwekọrịta ọ bụla.
Ọ dịghị ọrụ ọzọ dọtara uche m n'oge ahụ. Anọghị m na Facebook na Twitter. Anaghị m aza oku ekwentị. Ogologo oge dị mkpirikpi? Ọ bụghị ohere. Nke ahụ kwuru, ọtụtụ saịtị ndị m gara ga-efunahụ m. Ogbenye njirimara akwụkwọ, vidiyo vidiyo, usoro ndebanye aha siri ike, enweghị ozi kọntaktị… niile ndị a gbochiri ikike m nwere iji nweta ihe m chọrọ iji mee mkpebi m.
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-eji elekwasị anya na gburugburu ya na-eduhie eduhie maka uru ha. Dịka ọmụmaatụ, ọmụmụ ihe ọmụmụ, na-arụtụ aka na onye ahịa nke nwere nsonaazụ kachasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a rere, na-eleghara ihe ndị ọzọ na-atụnye anya, ma ekwetaghị ndị ahịa nwere nsonaazụ dị egwu. Nsonaazụ bụ na onye ahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-eme mkpebi nzụta ka ahapụ iji nyochaa ozi ahụ wee hụ ma ọ bụ mkpebi nzụta dị mma.
A na-ahapụ ndị na-agụ ha ka ha wepụta ọnọdụ nke aka ha n’ihe niile ị kwuru. Nke a nwere ike iduga atụmanya ndị na-enweghị atụ ma nwee ike ịmepụta ndu ndị na-adịghị mma maka nzukọ gị.
Igodo nke ndụmọdụ Mark bụ ebe a inye ihe di egwu NA ijide ogo nke ọdịnaya na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-agbagha. Na njedebe, nke a bụ ọrụ nke a oké inforgraphic mmebe. Ọtụtụ infographics bụ nanị ọtụtụ stats mara nke ọma na eserese mara mma. Mana ihe omuma ihe kacha mma na-etolite akụkọ na ndịna-emeputa na ọnụ ọgụgụ n'ime nkwado.
Twitter na Blogging
Ọtụtụ ga-ekwenye na nke a bụ ihe dị iche n'etiti Twitter na Blogging… na Twitter bụ maka onye ọrụ nlebara anya na ịde blọgụ na-enye ọnọdụ anyị chọrọ. M ga-arụ ụka na Twitter bara ezigbo uru n'ihi ọnọdụ ọ na-eweta. Na ụlọ ọrụ ọ bụla, onye ọrụ, isiokwu, mmelite ma ọ bụ hashtag, Twitter na-eweta mkparịta ụka na njikọta nke ọma iji nye gị ọnọdụ ịchọrọ. Ngwa dị ka Vine na Instagram enweghị ikike njikọ maka ọnọdụ miri emi - mana ekwenyere m na nke ahụ ga-abịa (ọkachasị ka ha na-arịọ maka mgbasa ozi).
Echegbula na uche nke na-agụ. Lezienụ anya na ị na-enye nnukwu uru na gburugburu zuru oke kachasị wee belata na nke kachasị mma, nke dị irè, na nke nwere ike ibute.
Tags: anyacontent Marketingnjuarụ ọrụarụmọrụElekwasị anyamfe
Septemba 2, 2013 na 11:56 ehihie
Anyị kwesịrị ijide n'aka na ọdịnaya anyị ga-erute ndị na-ege anyị ntị site n'iji ụdị dị iche iche
ngwaọrụ.Ma n'ezie, anyị ga-echetakwa na inwe ọdịnaya dị mma bụ isi ihe na-eme ka mgbasa ozi anyị gaa nke ọma.
Septemba 3, 2013 na 11:23 ehihie
Enweghị ike ikwenye karịa. N'ezie, na-enwe mkparịta ụka a taa na mmadụ. Ha sịrị “lee otú Godin si ede” nke m zara ya site n’ịsị, “nke ahụ dị ka ịsị ‘lee otú Harvard si enweta ego.”
Ha abụọ bụ outliers. Ọdịnaya siri ike, na-akpali iche echiche, na-akpali akpali GA-adọta uche ndị mmadụ.
Ị nọ ebe ahụ. Daalụ maka nke a. Nnukwu onye na-akwado Schaefer (mgbe ọ biputere ebe a-http://www.businessesgrow.com/2013/04/16/three-dazzling-emples-three-dazzling-examples-three-turned-online-influence-into-offline-results/)
yana, yabụ na-atụ anya pọdkastị ahụ… karịa ihe akaebe nke isi okwu gị!